एम. डी. मोजिबुल्लाह , रौतहट , २०७७ फागुन १५, शनिबार,०१:०७:PM
गौर, १५ फागुन । रौतहट जिल्लाको माधव नारायण नगरपालिकामा विकास भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो बढ्दै जान थालेको छ ।
रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा २०७३ साल देखि एकै जना कार्यालय प्रमुख रहेका कारण समेत भ्रष्टाचार बढेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्तकै कारण नगरमा विकास हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दा तथा जनता समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी नेता ललन यादवले आरोप लगाए छन्।
नेपाल सरकारले कम्तीमा एक वर्षमा कार्यालय प्रमुख फेरिनु पर्ने भएपनि सो नीतिलाई माधवनारायण नगरपालिकामा पालना नभएको देखिएको छ । कार्यालय प्रमुख प्रलव कायस्थ गाउँपालिका रहेको बेला २०७३/१२/०९ देखि कार्यरत रहेका छन् । नगरपालिका भएपछि उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिएर सो नगरपालिकामा उनले ब्रम्ह्लुट मच्चाउन सफल भएको विद्यार्थी नेता यादवले बताए ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कायस्थको पटक पटक गरी विभिन्न मितिमा ५ पटक सरुवा पनि भएको थियो । तर उनले तल देखी माथि सम्म सेटिङ मिलाएर माधव नारायणमै राज गर्न सफल भएका छन् । जनप्रतिनिधिको समर्थन भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनमा प्रमुख भूमिका निभाउँदै उनी लामो समय देखी एकै स्थानमा बस्न सफल भएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।